Hisy ve ny Sherlock Season 5? Inty ny zava-drehetra fantatray momba izany! - Fialam-Boly
Hisy ve ny Sherlock Season 5? Inty ny zava-drehetra fantatray momba izany!
Daty famoahana Sherlock Season 5
Sherlock Season 5 Kintana sy toetra
Ny tantaran'ny Sherlock Season 5
Andiam-pilalaovana hatsikana miafina momba ny kolikoly mifototra tanteraka amin'ny fahatsiarovan'ny mpitsongo an'i Sir Arthur Conan Doyle, nalefa any Royaume-Uni i Sherlock Holmes. Ny vanim-potoana fahadimy amin'ny Sherlock dia prequel amin'ny sarimihetsika Sherlock.
Ny andiany efatra vanim-potoana izay navoaka voalohany tao amin'ny BBC tamin'ny 2010 dia nitombo ho lasa tranga goavana amin'ny serivisy streaming Netflix. Nambara tamin'ny taona 2017 fa efa navoaka ny fizarana farany, ary ny toko ankehitriny dia mitondra ny lohateny hoe Ny Olana Farany.
Ireo mpankafy Sherlock Holmes feno fatratra eran'izao tontolo izao dia tsy afa-po tamin'ny andian-dahatsary mpitsongo ankehitriny sy mamirapiratra izay naseho vao haingana, fa ny tokana tokana kosa dia manana fitantarana Sherlock Holmes tany am-boalohany napetraka tamin'ny vanim-potoana Victoriana izay mifanaraka amin'ny tantaran'i Sherlock Holmes tany am-boalohany.
Ankoatra izay dia liana ihany koa ny mpankafy ny hahafantatra raha hahazo Sherlock vanim-potoana faha-5 tsy ho ela izy ireo na tsia. Ity fampahalalana manaraka ity dia hanampy anao amin'ny fitarihana fianarana bebe kokoa momba ny vanim-potoana manaraka.
Tsy misy daty voafaritra amin'izao fotoana izao amin'ny fandefasana ny vanim-potoana Sherlock vaovao. Vokatr'izany, mety hanantena isika fa havoaka voalohany amin'ny 2022 na 2023 ny andiany. Benedict Cumberbatch sy Martin Freeman no tompon'andraikitra amin'ny seho, izay vita tamin'ny 2017.
Sherlock Holmes dia mpilalao foronina noforonin'ny mpanoratra Arthur Conan Doyle.
Dr. John Watson dia mpitsabo misahana ny fitsaboana any Royaume-Uni.
D.I. Greg Lestrade dia mpanadihady tsy miankina.
Ny anaran-dramatoa Hudson dia Hudson.
Mycroft Holmes dia mpilalao foronina noforonin'ny mpanoratra Arthur Conan Doyle.
Molly Hooper dia mpilalao noforonin'ny mpanoratra Molly Hooper.
Mary (Morstan) Watson dia vehivavy monina any Royaume-Uni.
Tsy misy tranofiara azo alaina amin'ny vanim-potoana fahadimin'i Sherlock. Hampahafantatra anao tokoa izahay raha vao mahazo tranofiara.
Loharanom-baovao maro samihafa no nampidirina tamina tranga samihafa momba ny rihana iray izay nandao ny saina, ka niteraka korontana goavana izay tsy nahasarika ny mpijery na ny mpitsikera. Ny toko farany amin'ny vanim-potoana faha-4 dia nampiditra loharano maro tamin'ireo tranga samihafa tamin'ny rihana iray izay nandao ny saina, ka niteraka korontana goavana izay tsy nahasarika mpijery na mpitsikera.
Raha tokony ho voafandrika ao anatin'ny olana sarotra be, dia nasehon'ny fizarana manaraka i Sherlock sy Watson manao izay tsara indrindra vitany: famahana ireo tranga entin'ny hafa mila fanampiana.
HAMAKY BEBE KOKOA : Kilasy famonoana olona vanim-potoana faha-3: voamarina sa nofoanana?
Ny loharanon'ny andian-dahatsoratra dia voafetra ho amin'ny tranga tsy fahita firy avy amin'ireo boky, toy ny The Case of the Dancing Men, izay niseho tamin'ny vanim-potoana voalohany. Tahaka ny tamin'ny vanim-potoana voalohany, ny vanim-potoana faha-5 Sherlock dia tokony hiverina amin'ny fototry ny fampisehoana, miaraka amin'ny mpandraharaha sy ny namany mamaha ny raharaha mitovy amin'ny nataony tamin'ny vanim-potoana voalohany.
Eny tokoa, ny mpilalao sy ny ekipa dia hahita fotoana ao anatin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo mitaky ny hitondran'ny vanim-potoana Sherlock iray hafa amin'ny efijery, izay hanampy amin'ny fametrahana ny zava-drehetra aorian'ny vanim-potoana efatra amin'ny andiany tsy dia malaza.
Sherlock sy Watson dia mety tsy hahavaha tranga vaovao raha tsy efa niara-niasa nandritra ny taona maro, ka tokony hotadidinin'ny mpankafy izany.
Izany no zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny vanim-potoana Sherlock 5 izay tokony ho fantatrao. Manantena aho fa nankafizinao ity atiny ity.
Hamaky bebe kokoa : Hiverina amin'ny Netflix ve ny Rust Valley Restorers Season 4?
Raha manana fanontaniana ianao dia alefaso ao amin'ny faritra fanehoan-kevitra etsy ambany. Mamporisika anao izahay hifandray hatrany aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Toto Wolff Worth Net – Taona, Asa, Fiainana tany am-boalohany & More!
Putlocker Alternatives (2020) - Fandefasana maimaim-poana tsy voafetra
fomba fanaovana roblox lobaka
adobe famoronana pricing akademika rahona
inona ny serivisy mivantana ahafahana manolo tariby?
mijery sarimihetsika 2017 maimaim-poana amin'ny Internet
fitaovana android tsara indrindra amin'ny fanahafana